एक ब्यक्तिले शेष पछि फोक्सो दान गरे, चिकित्सकले फोक्सो झिक्दा देखियो यस्तो, परे आश्चर्यमा (भिडियो हेर्नुहोस्) – Classic Khabar
August 27, 2021 60
मान्छेले केही यस्तो कर्म गर्छन् त्यसको फल धेरै पछि पाउने गर्छन् । यस्तै एक घटना चिनमा भएको छ । त्यहाँ एउटा स्त ब्ध बनाउने भिडियो आएको छ । जसमा एकजना शृङ्खलाबद्ध चु रो ट ता न्ने (चे न स्मो क र) को फोक्सो कालो भएको देखाइएको छ ।
५२ वर्षीय एक चिनियाँ बिरामीले मृ त्यु पछि आफ्नो फोक्सो दान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । मृ त्यु पछि चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर अर्को ब्यक्तिमा प्रत्यारोपणका लागि फोक्सो निकाल्दा आफैं चकित भए ।
उक्त सुविधा दिने अस्पतालका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर चेनले शल्यक्रियाको नेतृत्व गरेका थिए । उनले भने, “मृ त्यु अघि बिरामीको सीटी स्क्यान गराइएको थिएन, उनको ‘ब्रै न डे ड’ भएको घोषणा गरियो, लगत्तै उनको फोक्सो दान गरियो ।” उक्त फोक्सो पूरा कालो भएको र त्यसभित्र टारको मात्रा अत्याधिक रहेको पाइएको थियो ।
“प्रारम्भिक अक्सिजेनेशन सूचकाङ्क ठीकै थियो, तर हामीले दान गरिएको अ ङ्ग का टे पछि प्रत्यारोपण गर्न नसक्ने महसुस गर्यौं”, डाक्टर चेनले थपे – हामी चिनीयाँ चु रो ट धेरै खा न्छौं, तर चु रो ट खा ने सबैको फोक्सो स्वीकार नगर्ने अव्यवहारिक हुन जान्छ, यद्दपी केही मापनका आधारहरू छन् । डेली मेलले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ ।
तत्कालै मृ त्यु भएको ६० वर्ष मुनिका ब्यक्तिको फोक्सो सामान्य सं क्र म ण रहेको र एक्स रे गर्दा अपेक्षाकृत सफा देखिनेको स्वीकार गर्दै आएको डाक्टर चेनले बताए । “यदी माथिको मापनहरू ठीक छन् भने हामी प्रत्यरोपण गर्न तयार हुन्छौं”, उनले प्रष्ट्याए ।
वर्ष २०१८ मा चिनीयाँ रोग निवारण तथा उन्मूलन संस्थानले गरेको अध्ययनले ३५ करोड ब्यक्ति धु म्र पा न गर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले वर्ष २०१८ मा गरेको अध्ययन बमोजिम नेपालमा धु म्र पा न ले वार्षिक २७ हजार १३७ ब्यक्तिको मृ त्यु हुँदै आएको छ ।
जुन कुल मृ त्युको १४.९ प्रतिशत हो । औसतमा ३० लाख ४६ हजार नेपालीले दैनिक धु म्र पा न गर्छन् । १०–१४ वर्ष उमेरका २१ हजार बालबालिका धु म्र पा न गर्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
Prevबेलायतमा भेटियो अर्को नयाँ भाइरस, के हो मन्कीपक्स ? यो कति खतरनाक छ ?
Nextअझै कति दिन जारी रहन्छ वर्षा ? यस्तो छ मौसमी चेतावनी
केहीबेर अघि देउवाले यस्तो निर्णय गरेपछि…..